मृगौला को पथरिया हुदा खानै नहुने खानाहरु || Bad Food For Kidney Stone - Nepali Health Media
मृगौला को पथरिया हिजो आज नेपाल मा हर कोहि मा हुने गरेको पाइन्छ । मृगौला को पथरिया हुँदा ढाड दुख्ने, बमिट आउन खोज्ने, बारम्बार पिसाब लाग्ने, पिसाब गर्दा पोल्ने वा दुख्ने, पानी कम पिएको बेला अत्याधिक पेट दुखेको महसुस हुने तर कहाँ दुख्दै छ? भन्ने ठम्याउन नसकिने गरि दुख्ने, कम्मर वा कम्मर को तल्लो भाग दुख्ने आदि जस्ता समस्या देखिने गर्दछन । यदि तपाईंलाई पथरिया को समस्या छ भन्ने संका लाग्छ भने तुरन्त नजिकैको मेडिकल मा गएर किड्नी अल्ट्रा साउण्ड (USG) मार्फत चेक गर्न सक्नुहुनेछ ।
पथरिया हुँदा खानै नहुने खानाहरु :
जाड, रक्सि, चुरोट, बियर, मधु, गुट्खा, सुपारी, खैनि जस्ता पदार्थ पटक्कै खानु हुँदैन ।
ढिलो पाचन हुने किसिमका खाना पटक्कै खानु हुदैन ।
किसमिस, काजु, स्ट्रबेरी, आरु, पटक्कै खानु हुदैन ।
पालुंगो साग, टमाटर, चम्सुर को साग वा चम्सुर, बैगुन, पटक्कै खानु हुदैन ।
कोका कोला, स्प्राइट जस्ता कोल्ड ड्रिंक वा सोडा पटक्कै पिउनु हुदैन ।
धेरै चर्को नुन, बट्टा मा हालेको अचार, पापड, कफी, दुध लगाइएको चिया पटक्कै खानु हुदैन ।
मासुमा धेरै प्रोटिन पाइने हुदा मासु पनि नखानु उचित मानिन्छ ।
पेट दुख्यो भनेर जथाभावी आफूखुसी डाक्टरको सल्लाह बिना पेनकिलर औषधि खानु हुदैन यसले मृगौला लाई ड्यामेज बनाउन पनि सक्छ ।
Tags: Bad Food For Kidney Stone best Kidney Stone doctor in nepal Healthy food for Kidney Stone hemorrhoids treatment in nepal Kidney Stone Kidney Stone clinic kathmandu Kidney Stone cost in nepal Kidney Stone disease in nepali kidney stone doctor in nepal Kidney Stone hospital in nepal kidney stone in nepali Kidney Stone in nepali language Kidney Stone in nepali word Kidney Stone meaning in nepali Kidney Stone medicine Kidney Stone medicine name Kidney Stone Nepal Health Khabar Kidney Stone nepali Kidney Stone Nepali Health Kidney Stone Nepali Health Beliefs Kidney Stone Nepali Health Book Kidney Stone Nepali health Insurance Kidney Stone Nepali Health Magazine Kidney Stone nepali Health Minister Kidney Stone Nepali Health News Kidney Stone Nepali health News Paper Kidney Stone Nepali Health online Kidney Stone Nepali Health patrika Kidney Stone Nepali Health Site Kidney Stone Nepali Health Tips Kidney Stone Nepali Healthpost Kidney Stone Nepali Healthy food Kidney Stone operation in nepal Kidney Stone pictures kidney stone surgery in nepal kidney stone symptoms in nepali Kidney Stone treatement in nepal Kidney Stone treatement in nepali Kidney Stone treatement in nepali language Kidney Stone treatment at home Kidney Stone Treatment cost in nepal Kidney Stone treatment hospital in nepal Kidney Stone treatment in kathmandu nepal nepali health nepali health media पथरिया मृगौला मृगौला को पथरिया मृगौला को पथरिया हुदा खानै नहुने खानाहरु
Previous अल्सर के हो ? अल्सरको बिरामीले खानै नहुने र खानु पर्ने खानाहरु के के हुन् ? Ulcer treatment at home
Next यी हुन् पायल्स को बिरामीले खानै नहुने खानाहरु, Piles treatment at home